Izicathulo ezi-10 ezihamba phambili zokulima ingadi, amabhuzu, namaClogs ngo-2021 - Ukubuyekezwa Komkhiqizo
Izicathulo ezi-10 ezihamba phambili zokulima ingadi, amabhuzu, namaClogs ngo-2021
Ukubuyekezwa Kwezicathulo Zengadi
1. AmaCrocgs we-Crocs Unisex Garden
2. Ama-Sloggers Premium Garden Clogs
3. Izicathulo zeMuckBoots Daily Garden
4. Ama-Sloggers Rain Water & Izicathulo Zensimu
5. Ama-Sloggers Amanzi Amanzi & Engadini Amaqakala Emabhuzu
6.MuckBoots Khuhla amabhuzu
7. Amabhuzu Ezolimo eTayley
8.MuckBoot Muckster II Ankle Shoes Umsebenzi
9. Izigqoko Zengadi Yangemuva Yezicathulo Zangaphambili
10. I-Sperry Women's Saltwater Rain Boot
Kungani Udinga Izicathulo Zensimu?
Izici ze-Garden Boots, Shoes, nama-Clogs
Uyini Umehluko Phakathi Kwezicathulo, Amabhuzu, kanye Nezikhonkwane?
Ukufuna Izicathulo Ezingangenwa Manzi
Ukuthola I-Sole Efanele
Lapho usebenza engadini kule ntwasahlobo, uzofuna izicathulo ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokutshala ongazithola. Ngemuva kwakho konke, uzobe uchitha amahora amaningi laphaya ukulungiselela ukutshala kwentwasahlobo , uhlukanisa iminyaka yakho, nokuningi. Uzofuna izicathulo ezintofontofo ezingahlanzwa kalula!
Nalu uhlu lwami lokuhlola lwezinye izicathulo ezinhle kakhulu zensimu emakethe njengamanje. Ngenkathi okuningi kwalokhu kungu-unisex ngesitayela, kuyahluka ngemibala etholakalayo noma osayizi. Vele, uzofuna ukunamathela ngosayizi wakho, futhi lokho kuyehluka, kepha lokhu kufanele kukunikeze isiqalo esihle maqondana nalokho okufanele ukufune!
Izincomo Eziphezulu Zezicathulo Zengadi
Okuhamba phambili sekukonke AmaCrocgs Unisex Classic Clogs Okuhamba phambili sekukonke
Ngenisa umoya phezulu
Inani Elifanele Ama-Sloggers Premium Garden Clogs Inani Elifanele
I-All-Day Comfort Insole
Izinto Ezenziwe Kabusha Ezingu-100%
Iphrimiyamu ehamba phambili Izicathulo zeMuckBoots Daily Garden Iphrimiyamu ehamba phambili
Izidlakela Zemvula Nezicathulo Zengadi
Isisindo Esisindayo seLug
Ama-Sloggers Amanzi Amanzi & Engadini Amaqakala Eqakala
Ukunyathela Okujulile Kwe-Lug
Ama-MuckBoots Scrub Boots
Isilinganiso se-8 'Shaft
I-Tingley Idoloze Amabhuzu Ezolimo
15 'Uzwane Olungaqondile
Izinto ezingama-30% ezenziwe kabusha
IMuckBoot Muckster II Ankle Shoes Work
Isilinganiso se-6 'Shaft
Izambatho Zengadi Yangemuva Yezicathulo Zangaphambili
Osayizi Run True
Isikhunta Semvula Yamanzi anosawoti Abesifazane baseSperry
Usayizi Uziphu Ukuvalwa
Crocs unisex omdala Classic | Izicathulo Zamanzi Slip Onethezekile ku-Shoes Clog, Okumnyama, Abesifazane abayi-8 Abesilisa Abesilisa base-US
IZIMPAWU ZOMUNTU WONKE: Ngebala nangesitayela se ...
UKUKHANYA KANYE NOKUJABULISA: Izimbuzi zabesilisa nabesifazane ...
IDizayinelwe ukulingana: Lawa ma-clogs okushelela kulula uku ...
Ama-Crocs athola inqwaba ye-flack, kepha masithembeke: ngezicathulo zokukhanyisa umsebenzi olula, lezi zingubo zezingadi ze-Crocs zinhle, futhi ziza ngemibala eyisigidi ngokuthandwa yiwo wonke umuntu.
Enziwe ngenjoloba, lawa alula futhi anethezekile. Azinamanzi ngokweqile ngenxa yerabha futhi, futhi ngeke zigcwale zigcwale. Udaka ne-gunk kukhishwa kalula. Banentambo yesithende ebagcina bangashushizi, futhi bazosebenza ngokuzungeza ichibi noma ngenkathi begeza imoto njengoba bezophuma otshanini nakudoti.
Ukungena komoya kulezi zicathulo kusho ukuthi izinyawo zakho zingamanzi noma zingcole, kepha ngesikhathi sasehlobo, lokho kuyisici, hhayi ukubuyela emuva! Futhi anginamahloni okuvuma ukuthi ngigqokise ama-Crocs ami esitolo ngezinye zalezo zinsuku ezivilaphayo, ezishisayo, ngoba nje zikhululekile futhi ziyashesha ukushelela.
Ama-Sloggers Premium Garden Clogs
Ama-Sloggers 260BK09 Womens Premium Clog, Mnyama, Usayizi 9
I-Clog Yabesifazane Yokuqala
Itholakala Ngombala Omnyama
Kutholakala Ngosayizi 9 Kwabesifazane
Ngenkathi ngikhombisa ama-clogs engadi yabesifazane esixhumanisweni, abakwa-Sloggers benza nensimbi yokuvala ingadi yamadoda.
Engikuthandayo ngalezi ukuthi zihlanganiswe nendwangu yokuqinisa umswakama, eyomisa ngokushesha ezogcina izinyawo zakho zomile futhi zithokomele. Okuphezulu kuhlangene kunqenqema oluthambile olungamelana namanzi oluboshelwe ukunethezeka, futhi.
Izicathulo ezivaliwe, ezingenawo umoya zenza izinyawo zifudumele phakathi nezinyanga ezipholile zonyaka, futhi kugcina wonke amanzi nodaka ngaphandle. Lokhu kungahlanjululwa ngaphansi kwepayipi, kwenze kube lula ukukuhlanza njengamaCrocs.
Okuhle kunakho konke, lawa angama-100% angavuselelwa kabusha. Le nkampani ize ikhuthaze abantu ukuthi babuyisele ama-Slogger abo uma esegugile, futhi bazoncibilika baphinde basebenzise okokusebenza ukukhiqiza okuningi. Ngakho-ke lezi yizicathulo zengadi ezisebenza kahle futhi ezisebenza ngokumangalisayo. Win-win!
I-Muck Boot The Original MuckBoots Daily Garden Shoe, Garden Green, 10 D (M) US / 11 B (M) US
Isicathulo sensimu esingasindi esingenamanzi ...
Donsa ithebhu esithendeni
Izicathulo zeMuckBoots zensimu zinentambo yenjoloba eshintshashintsha kancane evame ukuba namandla kakhulu ezindaweni ezisheshayo. Lokhu kuhle ngokusebenza ngaphakathi nangaphandle njengomphumela. Engadini, lawa awanamanzi ngempela, kanti phezulu kuvame ukuhlala kamnandi uzungeze iqakala ukugcina amanzi adukayo angangeni ngaphakathi.
Imibala engathathi hlangothi yenza izicathulo zeMuckBoots zibe kitschy kakhulu kunamanye amamodeli wezicathulo zengadi laphaya. Awekho amaphethini obuhlanya aphrintiwe kulezi, futhi atholakala ngemibala emibili - okuluhlaza okwe-sage okulingene nokuhlangana okumnyama onsundu. Empeleni abathathi hlangothi ngokwanele enhlanganisweni enombala onsundu ukuthi ingagqokwa emphakathini futhi ngeke ivelele.
Engikuthandayo ngalokhu, noma kunjalo, yilawo ematheni angaguquki. Lokho kuvumela ukuthengwa noma kusetshenzelwa ekuthambekeni. Noma ngubani ongazithola edinga ukukhuphukela entweni ukuze afinyelele kulesi sitshalo asithenayo, amathe anika ukuzinza okukhulu nokuvikeleka ngenkathi engadeli phansi kwezinyawo zakho.
Izicathulo Zabesifazane Abangena Emanzini Nengadi Yengadi ene-Comfort Insole, Midsummer Black, Size 9 Style ...
Kufaka phakathi amaSlogger 'okukhethekile' All-Day-Comfort '...
Isisindo somthwalo osindayo we-traction omuhle kakhulu.
Ulwazi lwe-Fit: Osayizi bonke kuphela. Ilingana ngokweqiniso nosayizi ....
Kufanele ngiyinikeze izicathulo zezingadi zakwa-Sloggers - zikhululekile ngendlela eyisimanga. Kutholakala ngosayizi bobabili besilisa nabesifazane, lezi zicathulo zinikeza ukusebenziseka kwesilayidi ngenkathi zisemboze ngokuphelele isithende. Imiklamo yabesifazane iyakhanya futhi inemibala, iyadlala kancane futhi iyathandeka. Izitayela zamadoda zincane kancane kodwa azikho ntofontofo.
Lezi zicathulo zenzelwe nge-insole ekhishwayo. Ngaphambi kokuzigeza, uzofuna ukuslayida i-insole. Ama-insoles ngokwawo angagcotshwa bese omiswa emoyeni, ngenkathi ungakwazi ukumane ukhiphe izicathulo, futhi kukhona ama-insoles angafakwa esikhundleni. Amathe abambeke kancane futhi anenyathela enzima yokusingatha izimo ezinodaka nezomile kalula.
Ngenkathi ama-Slogger atholakala kuphela ngosayizi ophelele, ahlinzeka nge-insole esayizi uhhafu (ethengiswa ngokwehlukana) engabekwa ngaphansi kwe-insole yakho ejwayelekile ukunciphisa usayizi wesicathulo ngesigamu. Ngakho-ke uma uyi-9.5, ungangena ku-9, noma ungathola i-10's bese ufaka i-insole engu-half-sizer ngaphansi kokujwayelekile ukuyenza ibe yiqiniso ngosayizi.
Ama-Sloggers Amabhuzu Amanzi Abesifazane Angangenwa Yimvula Nengadi ngeComfort Insole, iMidsummer Black, Usayizi ...
Iphethini yemvula enamaqatha aphakeme kakhulu ene-gored elastic ...
I-All Day Comfort insole
Ukunyathela okujulile kwe-lug ukuthola ukudonsa okuqinile
Ngaphambi kokuthi ngingene kakhulu kulezi: lezi zicathulo zamaqakala zingagqokwa abesilisa noma abesifazane. Kodwa-ke, amadoda angafuna ukukhetha amabhuzu amaqatha eMuckBoot Muckster II esikhundleni sento ethe xaxa ngokwesilisa.
Kodwa-ke, amabhuzu engadi yakwa-Sloggers aphawula wonke amabhokisi ngokokuqina nekhwalithi. Unetende elisindayo elenzelwe ukuphatha izimo ezisheshayo kalula. Azinamanzi ngokuphelele, futhi zine-insole efanayo nezicathulo zensimu ezinazo. Izinhlangothi eziphakeme ziqinisekisa ukuthi kokubili udaka namanzi kuhlala ngaphandle kwezicathulo zakho zensimu.
Lapho iningi lamabhuzu engadi yokuphakama kwamaqakala enzelwe kakhulu izicathulo zemvula ezinesitayela, futhi futhi kungenzeka noma angabi nawo amathe angenawo ama-skid, lezi zivimba ngokuphelele ukushibilika uzungeze ngisho nasezimeni ezimbi. Zonke izinto ezicatshangwayo, ngiyazithanda impela… kepha ngithanda namabhuthi engadi kaMuckster II engishilo ngenhla.
Kuhle kakhulu uthayi, futhi kuncike kuphela ekutheni ufuna isitayela sabesilisa noma isitayela sabesifazane.
I-Original MuckBoots Adult Scrub Boot, i-Garden Green, i-6 M US Mens / 7 M US Womens
Ibhuthi yokukhuhla amanzi engenawo ukuphakama kwethole eliphansi equkethe ...
Ulwelwesi lwe-AirMesh oluphefumulayo
Ngenkathi ngokuvamile angidingi okungaphezu kwezicathulo zensimu, ngezikhathi ezingavamile ngifisa sengathi ngabe nginokuthile okude kancane okungagcina i-gunk engxenyeni engezansi yemilenze yami. Lezi zicathulo zeMuckBoots engadini zilingana kahle nomthethosivivinywa. Ngolwelwesi oluphefumulekayo lokucwebezela umswakama kude nezinyawo zakho, kanye netende lenjoloba eliguquguquka kancane futhi linikeze, lokhu kuphelele ekusebenzeni ngaphandle.
Engangenwa ngamanzi ngokugcwele, lawa maMuckBoots enza khona kanye lokho okudingekayo kubo, ngisho nasezimweni zeqhwa. Zilungele abantu ukuhlanza izindlu zezinkukhu noma ukusingatha imfucuza yemfuyo, futhi kulula kakhulu ukuzihlanza.
Njengoba lawa eyirabha, kuyalulekwa ukuthi ungabashiyi ezimotweni ezishisayo isikhathi eside ukuze bangalahlekelwa yinoma ikuphi ukwakheka kwabo ezimeni eziyi-100 + degree, kodwa bahlala isikhathi eside ngokweqile ezimweni ezijwayelekile kakhulu.
indlela yokwenza imihuzuko ihambe ngobusuku obubodwa
I-TINGLEY 31151 Umnotho SZ10 I-Boot eguqulwe kwezolimo, i-15-Inch, emnyama
15 '- Uzwane Olungenabala
i-outsole ehlanziwe ikhipha imfucumfucu ngokukhulu ...
Umjovo ukwakhiwa olubunjiwe 100% manzi ...
Uma uqonde ngqo ekumakeni isitebhisi uye esivandeni, uhambisa umquba enqwabeni yomquba, noma nje ngokuvamile udinga amabhuzu asebenza kanzima, lezi zicathulo ze-PVC ukubheja kwakho okuhle kakhulu. Amabhuzu ezolimo eTingley azobamba cishe noma yimuphi umsebenzi onzima owabeke kuwo.
Amathe amancane aqinile ahlinzeka ukwesekwa okuqinile, futhi lokhu kukhulu - akunakwenzeka ukuthi uzongena emgodini kulezi. Akungenwa manzi ngokuphelele futhi kukhululekile, lezi zenzelwe ukuthi zingabi lukhuni ezimweni ezibandayo. Udinga ukuhamba ngoshaya iqhwa nxazonke? Lawa mabhuzu angayiphatha.
Yize iningi lethu lingasoze lidinge okuthile okuqinile, kuhle ukuthi sibe nokukhetha kulabo abahlala ngezinyawo zabo, besuka emsebenzini ongcolile baya emsebenzini ongcolile. Futhi uma usendaweni lapho udaka lwasentwasahlobo lugeleza ngokukhululeka, la mabhuzu azoba ngumngane wakho omkhulu.
8. IMuckBoot Muckster II Ankle Shoes Work
Muckster ll Ankle-Height Men's Rubber Garden Boots, Black / Otter, 12 M US
I-4 mm neoprene inikeza induduzo nokuguquguquka, ...
I-Stretch-fit Comline Topline igobile ukwenza ngcono ...
Ulwelwesi lwe-Airmesh oluphefumulayo luqeda umswakama futhi ...
Ngikubalulile ngenhla lapho bengikhuluma ngama-Sloggers ankle amabhuzu - futhi kwabesilisa, lokhu kuyindlela engaqhathaniswa. Lezi zicathulo zensimu eziphakeme ngamaqakala zinikela nge-flex-fit sole ukuze zithole induduzo enhle, futhi izicucu ezingajulile azigcwali udaka noma i-gunk. Zinde ngokwanele ukuphatha imisebenzi otshanini obumanzi noma inhlabathi evulekile, ethokomele kahle.
Njengezicathulo zaseSloggers engadini, lezi kulula kakhulu ukuzihlanza. Vele ugijimise ipayipi phezu kwazo futhi sekuphelile, akunangqondo, akukho siphithiphithi. Zonke izinto ezicatshangwayo, bekungubopho phakathi kwalaba nabakwaSlogger. Ngingakhetha ngenjabulo noma amabhuzu engadi yenkampani.
9. Izambatho Zengadi Yangemuva Yezicathulo Zangaphambili
Ama-Backdoorshoes Waterproof Premium Garden Clogs ane-Arch Support-Meadow Design
AMANZI NOKUKHANYA KWAMANZI: 100% okungangenwa manzi namabhangqa ...
SIZES RUN TRUE - Oda usayizi wosayizi wesigamu
IZIMPAHLA ZOKUSUSA, EZINOKUHLEKA NEZINGABHEKEKA: Mane ...
Ngabe udinga ukwesekwa kwe-arch okungaphezulu kunezinye izicathulo zensimu ezingakunikeza? Ngenkathi izinhlobo eziningi zinokuqukethwe okukodwa okuzozivumelanisa nephethini yakho yonyawo, ama-clogs engadi ye-Backdoorshoes anikezela ukwesekwa kwe-arch okwakhelwe ngaphakathi kusukela ekuqaleni. Lokhu konke kungenxa yomklamo wabo we-insole, osiza ukusekela abantu abane-arched ephezulu kalula.
Ama-insoles afana nezinhlobonhlobo ze-Backdoorshoes nawo mahle ngoba angasuswa futhi aphonswe emshinini wokuwasha ukuze ahlanze. Akusekho ama-insoles anukayo! Isicathulo esisele singavele sikhishwe ukuze sihlanzwe.
Yize lezi zingahlali isikhathi eside njengezinye zezinto ezenziwe ngezicathulo zensimu emakethe, lokhu nakanjani kuyinto okufanele uyicabangele. Zinethezekile futhi ziphefumula kangcono kunezinye izinhlobo, lawa ma-clogs engadi ayindlela enhle yezimo ezifudumele. Zonke izinto ezicatshangwayo, ngenkathi kungahle kungabi ukukhetha kwami ​​okuphezulu, kungahle kube okwakho!
Ukuthengiswa Amabhuzu wamanzi anosawoti eSperry, TAN / DK Brown, 8
Silwa nokubanda, isimo sezulu esimanzi nokungangenwa manzi ...
Ibhuthi elingangeni manzi eliphefumulelwe idada
Isikhumba ngaphezulu ngenyawo lenjoloba elingangenwa manzi
Uma ufuna ibhuthi yasengadini engaphinde ibe kabili njengesitayela, ibhuthi yemvula egqokwa nsuku zonke, ungabheki kude neSperry Women's Saltwater Rain Boot. USperry uzenzele igama ngenxa yokwakhiwa kwekhwalithi yabo kanye nesitayela sedokodo lebhu elivelele.
Uma wenza ingadi esimweni sezulu esimanzi, lezi zicathulo zemvula eziqinile, ezingangeni manzi, nezimangelengele kungaba yindlela engcono kakhulu kuwe engadini uma kuqhathaniswa nezinye zezinsimbi zethu ezisindayo noma izinketho zebhuthi ezivulekile ezingaphezulu.
amabhande kankulunkulukazi anamagoda amancane phakathi
Uma ufana nami, umelane nokuthola izicathulo zengadi isikhathi eside impela. Kungani ungake udinge izicathulo zokulima ingadi nje?
Ake ngikutshele ukuthi kungani: uzophendula cishe zonke ezinye izicathulo uzenze udoti ongcolile, onodaka. Ngisebenzise izicathulo ezindala zokugijima engadini futhi ngiziqede nya. Awukwazi ukuwageza kalula, ngoba kuzothatha izinsuku ezimbalwa ukuthi zome ngokuphelele.
Ukugcwalisa izicathulo zakho ngephephandaba bese uzibeka eduze kweheater kuzozomisa ngokushesha, kepha ezinye izindwangu zizoma ziqine lapho ezinye zizogcina sezenziwe buthaka ngokuwashwa kaninginingi. Futhi masingakhohlwa, izicathulo eziningi ezijwayelekile zinama-insoles azoncela amanzi futhi acobeke lapho uhamba. Akekho umuntu othanda izinyawo ezidumbile.
Ngokuqhathanisa, izicathulo ezinhle zokulima izingadi zizobambelela ekutholeni amandla. Ungahlanza kalula udaka bese uwasusa kuzo, futhi zoma ngokushesha okukhulu. Ngisho nalabo abanezimbobo zokungenisa umoya ngeke bagcine ngokuthi ama-insoles athole ukucasuka (ngaphandle kokuthi usebenzisa ama-insoles angalungile!), Futhi ngokuvamile anethezekile impela.
Uma uzoba esivandeni ngaso sonke isikhathi, kungani ungabi nezicathulo ezimbili ezenzelwe leyo nhloso ngokukhethekile? Zitholele izicathulo ezisezingeni ezisezingeni eliphezulu zokulima izingadi. Uzojabula ngokuthi ukwenzile.
Amabhuzu engadi ahlinzeka ngokuvikelwa ezimweni ezinodaka futhi enza ukugqoka okuhle kwemvula. Umthombo: Lorin Nielsen
Sikhuluma ngezicathulo, ngakho-ke sonke siyazazi izisekelo. Kepha maqondana nokusetshenziswa kwengadi, kunezici ezithile ezihlukile zezicathulo zensimu ezidinga ukucatshangelwa ngaphambi kokuthenga.
Umehluko omkhulu phakathi kwalezi zinhlobo ezahlukene zezicathulo kumane nje kutholakala.
Ama-clogs engadi anenani elincane lokumbozwa. Imvamisa, lezi zinesithende esiphansi, esizenza zikwazi ukushibilika ngokushesha ukuze ziphume kancane ziye engadini. Abanye banikela ngentambo esiza ukubamba okuvalekile endaweni ukuze kungasheleli onyaweni.
Okulandelayo, sinezicathulo zensimu. Lezi ngokujwayelekile zakhiwe njengesicathulo esivamile ngoba zinenkomishi yesithende, kodwa kusalula ukushibilika noma ukushiya onyaweni.
Ekugcineni, kukhona amabhuzu engadi. Yenzelwe izimo ezinodaka, ukuphakama kwebhuthi kungaba i-ankle noma ithole eliphakathi. Imvamisa, lezi zinendawo eyodwa eqinile futhi zilungele ukusebenza ezindaweni ezinkulu zepulazi noma ezimeni ezinodaka phakathi nezinyanga zasebusika nezentwasahlobo.
Enye yezinto zokuqala okudingeka usungule lapho ufuna izicathulo ezinhle kakhulu zensimu ukuthi udinga izicathulo ezingangeni manzi noma cha.
Uma uzophuzela izitshalo zakho ngesandla njalo, izicathulo ezingangeni manzi ziyisidingo. Akekho ofuna ukugqoka izicathulo ezi-omile, ezimiswe uhhafu ezacwiliswa ngayizolo! Kodwa-ke, ngokuvimba okuphelele kwamanzi kuza nemfudumalo. Ekushiseni kwehlobo, lezo zicathulo kungenzeka empeleni zishise kancane kunalokho ongathanda.
Kunezinketho ezakhiwe ngezinto ezingangeni manzi kodwa futhi ezinomoya omncane. Imigodi echachaza izicathulo ingase imanzise izinzwane zakho, kodwa futhi zizonikeza nezinyawo zakho igumbi lokuphefumula.
Kodwa-ke, izimbobo zivumela nodaka nezinye izinto ukungena ngaphakathi. Lokhu kungaba kuhle uma usebenza egcekeni ehlobo, kepha ngeke kuvikele izinyawo zakho ezinyangeni ezibandayo.
Izicathulo zengadi ziza ngobukhulu obuhlukahlukene nobubunjwa. Umthombo: Lorin Nielsen
Amathe akho ancike ekutheni uzobe wenzani ngezicathulo zakho. Futhi kunezinhlobonhlobo zezinketho ezitholakalayo.
Uma umane nje ufuna okuthile ongakushibilika lapho ungena egcekeni uyokwenza ukhula oluthile, kungenzeka ungadingi amathe asindayo. Okuthile okukhanyayo nokuguquguqukayo kuzosebenza kahle kulezi zimo. Lezi zicathulo zingaba ntofontofo ngendlela emangalisayo futhi zilula ezinyaweni. Ungahle ukhohlwe nokuthi uzigqokile.
Amagceke ane-mulch evame ukuhamba ngaphezulu noma engahle ashelele ezimweni zemvula kuzodinga okuthile okuqinile. Kuleli qophelo, isisindo esijwayelekile esinesisindo esiqinile silungile. Iningi lezicathulo zengadi ziza nesele eliqinile, ngakho-ke lokhu kungukukhetha okubanzi kakhulu.
Amathe amnyama aqinile nawo eza namazinga ehlukene okuthumela imiyalezo phansi ezicathulweni. Lo mbhalo usiza ukuhlinzeka ngokudonsa ezimeni ezithambile. Abantu abanesembozo esisindayo seqabunga ekwindla noma abanodaka ebusika nasentwasahlobo bangadinga ukudonsa okungaphezulu.
Futhi ekugcineni, kukhona ama-boot soles asebenza kanzima. Lezi zingacishe zibe yintshi ubukhulu futhi zingaphatha yonke into kusuka ekumbeni izimbobo kuya ekungeneni kwezitebele. Imvamisa, lezi zinamatende anzima aqoshwe phansi azovimbela ukushushuluza uzungeze lapho isimo sezulu singesihle, kepha futhi lokhu kuvame ukufudumala kakhulu lapho kuqala ukushisa.
Izicathulo zokulima akudingeki zibe nzima - kufanele nje zenze umsebenzi. Futhi uhlu lwami lukunikeze ezinye zezinketho eziphezulu ezitholakalayo njengamanje ongakhetha kuzo. Ingabe unayo uhlobo oluthandayo lwezicathulo zengadi? Ingabe ama-clogs owathandayo, izicathulo, noma amabhuzu? Ngitshele kumazwana abekiwe!
Uneminyaka emingaki uBarack obama ndodakazi
izindawo zokubhukuda eziphakeme kakhulu
uzizwa kanjani ubhulu
ingane yesiphetho - izikweletu, izikweletu, izikweletu